Apple waxay bilaabi kartaa 10,5 "cabbir iPad ah sanadka dambe | wararka iPhone
Apple waxay bilaabi kartaa cabir cusub oo ah 10,5 ″ iPad-ka sanadka soo socda
Ignacio Sala | | iPad, iPad Pro, Alaabada Apple
In muddo ah hadda, waxay umuuqataa in Apple ay rabto inay bedesho habka aan u isticmaalno iPad-kayga. Dhammaantood waxay ku bilaabmeen markii la bilaabay 12,9-inch iPad Pro, aalad ay weheliso qalinka Apple wuxuu u noqday aalad ugu dhow qalab badan oo adeegsadayaal ah, gaar ahaan kuwa u heellan sawirka, naqshadaha, naqshadeynta ... laakiin keliya maahan suuqaas, laakiin waxaa jira isticmaaleyaal badan oo durbaba bilaabay inay ku beddelaan laptop-kooda caadiga ah tan iyo markaas wuxuu noo ogolaanayaa inaan si ficil ah u qabanno waxqabad kasta oo kumbuyuutar ah, haddii uusan isticmaaluhu u baahnayn inuu adeegsado codsiyo gaar ah oo aan waligeen ka heli karin nidaamka deegaanka ee iOS, si kasta oo ay Apple isugu dayo oo aysan u joojin daah furka xayeysiis cusub si ay isugu daydo inay na qanciso
Ming-Chi Kuo waa mid ka mid ah boqorada wararka xanta ah, mahadnaq uu la leeyahay xiriiriyaashiisa khadadka wax soo saarka ee uu sheeganayo inuu haysto. Kuo wuxuu ka mid ahaa falanqeeyayaasha in mudo ah hada wuxuu wax ka badalayaa saadaasha uu sameynayo, plumiyay kalsoonida badan ee ay heshay illaa iyo hadda. Hadalladii ugu dambeeyay ee falanqeeyahaan waxay sheeganayaan in Apple ay bilaabi karto iPad-ka 10,5-inji cusub, cabir kaas oo hubaal ka dhigaya qaabka iPad-ka ee 9,7-inch ah ee caadiga ah in suuqa laga waayo. Mise waaba noocii Mini-ga ahaa ee suuqa ka baaba'ay? Sanadka soo socda waxaan ka takhalusi doonaa shakiga.
Sida laga soo xigtay Kuo, Apple waxay soo saari doontaa seddex nooc oo iPad ah sanadka 2017: 12,9-inch, 9,7-inch iyo cabir cusub oo 10,5-inji ah. Waxay sidoo kale hubineysaa in soosaarida cabbirka shaashadda cusub ee iPad-ka aan loogu talagalin iibka qalabkan inuu koro laakiin halkii waxay rabtaa inay diirada saarto suuqyada kala duwan, sida waxbarashada iyo ganacsiga. Haddii ugu dambeyntii kuwani yihiin ujeedooyinka Apple, uma badna in qodobka soo socda ee Apple uu soo bandhigi doono nooc cusub oo iPad ah ama cusbooneysiinta mid ka mid ah moodooyinka hadda jira ee suuqa yaalla.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple waxay bilaabi kartaa cabir cusub oo ah 10,5 ″ iPad-ka sanadka soo socda
Sidee loo hagaajiyaa shilka barnaamijka 'PayPal' markii la xiro
Apple sidoo kale waxay bilaabeysaa beta 6 ee watchOS 3, tvOS 10 iyo macOS Sierra